uhlu Ezinhle Kakhulu sezimangaliso eziyisikhombisa zezwe senziwa eminyakeni 2000 edlule umbhali ngesiGreki. Wayekholelwa ngokuqinile ukuthi akunakwenzeka ukuba abhubhise. Ezweni lanamuhla futhi namanje owuthanda kulolu hlu imilingo. Colossus saseRhodes unendima udumo. Abantu endaweni engenabantu kulesi siqhingi esakhiwe le sithombe in ukubonga kuNkulunkulu ngenxa lokulabhela Helios ngesikhathi livinjezelwe yonyaka amabutho yizinkulungwane ezingamashumi amane.
Uphi Colossus saseRhodes?
Manje kuyathandeka ikuphi. Kodwa, njengoba sekushiwo, ngokusho legend, yayakhiwe phezu esiqhingini saseRhodes futhi ubonakala kude kolwandle. Kulapha, ngokuvumelana abalobi basendulo, umfanekiso: uyilanga yesibili iza ubuso nobuso ngowokuqala. It yadalwa cishe ngo-280 BC. e. umfundi ka Lysippos umqophi Kares. Futhi nakuba eminyakeni engu-60-plus we-Colossus saseRhodes wawa, bathi ngisho emanxiweni babe umxhwele emhlabathini. Ekugcineni, esifanekisweni labhujiswa amasosha Arab futhi uthengiswa Syria emadwaleni. Namuhla akunakwenzeka ukuthola ngisho nokuncane kuyo leyo ndawo lapho wama. Izazi Classical baye babonisa ukuthi abantu esifanekisweni zalolu hlobo zivamise ibekwe ngemuva ethempelini. Kodwa ithempeli Helios baseRodu ikhona egqumeni enkabeni yedolobha, futhi imikhondo Colossus ayikwazanga ukutholakala khona. Nakuba ngenxa lokho kugomela ongayiqala omunye, akukho qiniso ezingabalulekile kangako. Kwatholakala ukuthi izindonga enkulu izikhathi Colossus azungeze umuzi nalabo phansi kwayo echwebeni. Lokhu kufakazela ukuthi itheku lase-esiqhingini saseRhodes ngokuyinhloko yokufakelwa. Lokhu kusho ukuthi nesithombe Colossus saseRhodes sasiyoba isiphelo odongeni itheku, njengoba kwezinye itheku yokufakelwa lasendulo. Wayengakwazi zivale umnyango ke. Kuze kube yimanje, kufanele kube yingxenye yesine okusezingeni eliphezulu imayela. Kodwa futhi metal noma itshe ayikwazi ukumelana amaphaphu ezilethwa neziphepho ebusika. Namuhla, ekupheleni odongeni itheku imele inqaba ephakathi St UNicholas. Ingxenye yawo is eyenziwe ngetshe, aqoshiwe ezikhathini zasendulo. Uma sibukisise izingcezu zemabula basisebenzisa njengeHholo amabhlogo wokwakha lokhu inqaba kancane, umuntu angabona ayazi ukuthi zaqoshwa amakhosi yezikhathi Colossus saseRhodes. NgeNkathi Ephakathi, abantu baye bathola ukusetshenziswa entsha ngabo. Into ezithakazelisayo kakhulu kula amatshe wukuthi abawona sikwele. Ngamunye wabo ucezu uhla imitha-17, has a ugobile. 17 amamitha - lena ubukhulu esiqondile umbhoshongo inqaba encane. Kungenzeka ukuthi abakhi medieval wakhela ngqo esisekelweni lasendulo ukukhonza esisekelweni for kwesithombe kwabawayo.
Yini Belifana Colossus saseRhodes futhi senziwa kanjani?
Umlobi womlando, phakathi kwesikhathi lapho esifanekisweni wayesamile, wathi ukuthi yayakhiwe isimiso esifana indlu. Fragments ezinye izibalo lasendulo abonisa ukuthi ezakhiwa njengoba masterfully njengoba Zeus ka Phidias. Izinqamu ngezinqamu kusukela kohlaka steel namatshe. I-Colossus saseRhodes laligcwele amashidi ngethusi. Njengoba for ukumisa, kukhona ngempela akekho owaziyo ukuthi wayemi noma uhleli, isibonelo, wahola inqola. Nakuba amacebo noma ungazama ukubheka esifanekisweni kwamakhophi eyenziwe Lysippos ngemabula ukuze Alexander. Kodwa, cishe, Colossus wayengekho ngikhathele futhi abaqhoshayo, efana Hercules ubudala. Kunalokho, kwaba nensizwa ubuso enhle, iyafana Ehola esifanekisweni ongashiwongo ngegama wathola at Rhodes, okuyinto kwenza siwaqonde entsha. I engavamile walesi isinqamu kuba phambi sebuningini izimbobo efanayo kwisiyingi. Uma ufaka izikhonkwane kuzo, kuyacaca ukuthi washintsha afanako, njengoba imisebe yelanga phezu kwesithombe Helios, okungukuthi, kungenzeka kakhulu, futhi kukhona ekhanda lakhe. Ngaphezu kwalokho, kuthiwa lwabhalwa (ngaphakathi plus noma lokususa iminyaka engu-100) ngesikhathi esifanayo njengoba ukudalwa Colossus. Uma ubuka eduze ebusweni, ungabona umlomo efanayo evulekile, ujike entanyeni, amehlo evulekile. Omunye komunye Aleksandr Makedonsky. Lokho kuyafana Okugweda esikoleni, okuyinto lakhiwa Colossus saseRhodes, wadala isithombe yenkosi, kamuva wazungeza izwe lonke.
I abaholi be-USSR
Ugaxekile - akunjalo yini?